Broccoli | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Hazel (hazandrano) sy hazolamena: ny fahasamihafana sy ny endri-javatra
Ny ankamaroan'ny olona dia tia ny voanjo ary ampidiriny ao amin'ny sakafony manokana izy ireo, izay noho ny habetsahan'ny karazan-tsakafo rehetra, ny singa mpitsikilo sy ny vitamina, ary tsy mahagaga. Ny tena malaza indrindra, miaraka amin'ny karazana voanjo hafa, dia hazom-boaloboka sy hazolaina, ny fahasamihafana misy azy dia tsy manan-danja ary indraindray tsy voafaritra amin'ny olona.
Ny karazana broccoli malaza indrindra
Broccoli dia karazana karaoty. Tena legioma tena ilaina izany. Manana asidra feno folaka, vy, fibre, vitamin C ary zavatra maro hafa ilaina ho an'ny vatan'olombelona izy io. Ary ny fananganana tahiry vitaminina toy izany dia mety ho eo amin'ny toerana misy anao. Ity lahatsoratra ity dia mamaritra ny fomba malaza sy tena mety indrindra amin'ny fanangonam-bokatra ny broccoli.
Ny fampiasana sy fampiasana broccoli, ny tombony sy ny loza
Ny Broccoli dia malaza noho ny habetsaky ny zavatra ilaina ao. Matetika izy io no ampiasaina amin'ny sakafo, saingy nahita ny fampiharana azy amin'ny cosmetology. Na dia eo aza ny tombontsoa goavana amin'ny vatana, dia misy ny fanoherana. Ny kaloria sy ny akora simika ao amin'ny broccoli Ity loha ity dia heverina ho ambany kalorie, ary noho izany vokatra avy amin'ny sakafo.
Fiomanana sy fijinjana broccoli
Ankehitriny dia misy fomba maro hambolena ny broccoli mandritra ny ririnina. Ny sasany amin'izy ireo dia natao mba hiarovana ny karazan-tsakafo mahavelona amin'ny laisoa, ny hafa - mba hiomanana amin'ny fampiasana bebe kokoa ny endriky ny sakafo hafa, ary ny olon-kafa dia miseho ho toy ny sakafo misaraka. Ny fahasamihafana toy izany dia ahafahan'ny mpivady tsirairay mifidy fomba iray izay mahafeno ny filany, ny fahafahana ary ny fihetseham-po.
Mangatsiatsiaka ny ririnina amin'ny ririnina: dingana isan-karazany amin'ny sary
Ny Broccoli dia heverina fa ny havokavoka akaiky indrindra - legioma iray izay manana toetra tena sarobidy ho an'ny vatan'olombelona. Misy karazana proteinina maro, vitaminina maro, asidra amine sy mineraly, ary koa be dia be. Manome toro-hevitra ny manam-pahaizana anisan'io vokatra io amin'ny fihinanana ny olona manana olana amin'ny rafi-panafody.
Ny toetra sy ny fambolena ny tanimboly "Zephyr"
Pine: famaritana, toetra, fambolena
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Broccoli